Madaxweyne Farmaajo oo Dhuusamareeb uga qeybgalaya shirka Dowladda Federaalka iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo Dhuusamareeb uga qeybgalaya shirka Dowladda Federaalka iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah
July 18, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in uu maanta tago magaalada Dhuusamareeb, sida uu sheegay xafiiska warbaahinta Villa Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ka qeybgali doona kulan u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Kulanka ayaa looga wada-hadli doonaa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah iyo sidoo kale doorashooyinka soo socda.
Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka oo markii ugu horeysay sanad kadib kulmay
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah xarunta madaxtooyada Garoowe ku qaabilay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali iyo safiir Qin Jian ayaa waxa ay ka wadahadleen arrimo kala [...]